Thwebula Pinterest 6.4 – Vessoft
Pinterest – a software ukushintshanisa futhi sibeke izithombe ezahlukene yokuxhumana. Isofthiwe ikuvumela ukudala albhamu bese wengeza kubo izithombe zakho siqu noma izithombe posted by abanye abasebenzisi. Pinterest liqukethe lula search engine esenza ukuthola albhamu ethandwa ukuthi izigaba ezahlukene. Isofthiwe kwenza ukuba ubhalisele kwamanye abasebenzisi, ukuhlola ukuba izithombe bese wengeza imibono kubo. Pinterest futhi ikuvumela ukuba wabelane izithombe ngokusebenzisa ezinye izicelo ezifakiwe kudivayisi yomsebenzisi.
Exchange kanye nokubekwa images
Ikhono ukwabelana izithombe ngokusebenzisa ezinye izicelo
Amazwana on Pinterest:
Pinterest Ahlobene software:
English, Afrikaans, Français, Español... Instagram 9.7
Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe ukuxhumana nokuphatha yokuxhumana wenkampani ethandwa. Isofthiwe esihlanganisa zonke izinkonzo Google futhi ungakwazi ukuqalisa ukuvumelanisa wabo ne-akhawunti yomsebenzisi.
Abadlali Media Functional music player equkethe 11 lwamasethingi oluvamile umsindo and 5 band Equalizer nge uhla omkhulu imisindo.